Izixhobo ze-5 zoyilo ezinomxholo obonakalayo obonakalayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJorge Neira | | ngokubanzi, Imifanekiso, Ukuphefumlelwa
Ukuba ufuna ukudibana neenjongo zakho zokuthengisa kwi-Intanethi, kufuneka uqale uqonde zeziphi izinto ezibonakalayo ezinamandla xa kufikwa ekuthatheni ingqalelo yabasebenzisi kunye nokufumana impendulo enkulu, kuba kuya kufuneka uyazi ukuba ngokubanzi, abantu zizidalwa ezibonakalayo.
Imifanekiso isebenza ukunceda ii-brand, ukuze babalise ibali labo kwaye bagqithise umyalezo. Esi sesinye sezizathu zokuba iimveliso ze-ecommerce zisebenzise isoftware yorhwebo ebonakalayo inqaku elinomtsalane kwiifoto zabathengi, ngakumbi xa zisetyenziswa kwimeko efanelekileyo kukhuthaza ukuthengisa.
1 Ngapha koko, zichaphazela ngokuqinisekileyo izigqibo zokuthenga
Ngapha koko, zichaphazela ngokuqinisekileyo izigqibo zokuthenga
Ingqondo yomntu ibonakalisiwe ukuba iqhubekeke nemifanekiso izihlandlo ezingama-60.000 ngokukhawuleza kunombhalo. Ngaphaya koko, uphononongo lwakutsha nje olwenziwe nguMicrosoft Corp. lubonakalisile ukuba abantu baphulukana noxinzelelo emva kwemizuzwana esi-8.
Oku kwenza ukuba Umxholo obonakalayo, kuba kufuna ingqwalaselo enkulu ukuqonda into ofuna ukuyidlulisa. Nokuba uyintoni na injongo yakho ikwi-Intanethi, ukuba uyonyusa uguquko lwakho, ukufumana abalandeli abaninzi okanye ukwandisa ukuzama ukwandisa ukusebenza kwe-SEO yakho, kufuneka isixhobo soyilo lwegraphic ukwenza umxholo obonakalayo oya kuthanda abaphulaphuli bakho, ke qaphela ezi zixhobo ukuze uqalise.
Namhlanje zihlala zisetyenziswa ngezantsi ukubonisa ulwazi oluntsonkothileyo ngendlela eqinisekisayo nelula. Abandwendweli kwiwebhusayithi yakho banamathuba okuba batye umxholo wakho kwaye baqonde ngokupheleleyo idatha yakho, ukuba iqulethwe kwizinto ezibonakalayo.
Eyona nto intle malunga nePiktochart kukuba inezixhobo ze-infographic ezirhuqa kwaye ilahle. Ikwanayo ngaphezu kweetemplate ezingama-600 eyahlukileyo kukunika uyilo oludingayo lokuhambisa ibali lakho.
Unokubonisa i-infographic yakho kwisilayidi, njengoko iPiktochart ibandakanya iimephu, ii icon, iifoto kunye neevidiyo zeshishini lakho.
Akunyanzelekanga ukuba ube ngumqali ukuze ube nakho ukwenza imifanekiso yevektha. Ukuba ufuna umhleli wemizobo, i-Vectr iya kuba lolona khetho lwakho lubalaseleyo njengoko uza kufumana imizobo ecekeceke necocekileyo, ukujonga iwebhusayithi kunye nezinye iintetho nokuba ungasebenzisa liphi iqonga kwaye eyona nto intle kukuba Umhleli osisiseko wegraphic ukhululekile.
Ngaba unayo isoftware yoyilo loyilo oza kuyisebenzisa? Mhlawumbi awunguye umntu wobuchwephesha, kodwa unononophelo olwaneleyo lobugcisa bemifanekiso esemgangathweni ethetha ngawe kunye nenkampani yakho.
Khetha i-Canva ukuba ufuna ukwenza imifanekiso yemithombo eyahlukeneyo yezentlalo, yentengiso yemidiya yoluntu okanye ukwenza ukugcwala kwiwebhusayithi yakho.
Ukubonelela ngakumbi ngokhetho kwi-brand yakho, unokukhetha phakathi kwayo kuphela Ukukhetha isicatshulwa, iimilo, uyilo loyilo kunye nezinye izinto ezoyikekayo. Unokumema ukuya kuthi ga kumalungu ali-10 simahla ukuze sisebenzisane kuyilo ekwabelwana ngalo kunye neefolda.
Ukuthenjwa ziimpawu eziphambili zehlabathi, iStencil inceda iibhlog kunye nabathengisi ukuba benze imifanekiso epheleleyo ngendlela eluncedo nelula. I-Stencil yenzelwe ikakhulu ukukunceda ufumane ukuzibandakanya okungakumbi kwezentlalo kumaqonga eendaba ezentlalo ngezixhobo zayo ezinomdla.
Ukunika inkululeko engakumbi yokuyila, ineetemplate ezingaphezu kwama-200, ngaphezu kweefonti zewebhu ezili-1.900 kunye namakhulu amawaka eempawu nemizobo.
Esinye isixhobo soyilo ongafanele ukuba usiphose yiEasel.ly, njengoko esi sixhobo silungelelanisa inkqubo yokwenza infographics ngenani elikhulu isicatshulwa, umfanekiso kunye noyilo ongakhetha kuzo onokukhetha kuzo. Unokhetho lokwenza umxholo wakho ukuqala okanye ukhethe iitemplate ezinokuhlelwa ekuhambeni.
Inemixholo eyahlukeneyo ye-infographic, enje nge-infographics yobugcisa boluntu, kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi yayo ukuze wenze umxholo obonakalayo owufunayo ngaphandle kwesihloko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Izixhobo ze-5 zoyilo ezinomxholo obonakalayo omkhulu
Ukubaluleka koyilo lweendaba